इसेवाकाे रिवार्ड पाेइन्ट कसरी प्रयाेग गर्ने, कति रिवार्ड हुँदा के पाइन्छ ? - Arthasansar
इसेवाकाे रिवार्ड पाेइन्ट कसरी प्रयाेग गर्ने, कति रिवार्ड हुँदा के पाइन्छ ?
शुक्रबार, ०२ बैशाख २०७९, १२ : ०० मा प्रकाशित
इसेवामा प्राप्त गरिने रिवार्ड पोइन्ट भनेको इसेवा प्रयोगकर्ताहरूलाई धेरै सेवाहरू प्रयोग गरेबापत दिइने एक्स्ट्रा मूल्य हो । तपाईँले जति धेरै सेवाहरू सेवाहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, आफ्नो खातामा उति नै धेरै रिवार्ड अंकहरू जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ ।
कतिपय व्यक्तिहरूलाई इसेवामा प्राप्त रिवार्ड पोइन्टहरू कसरी प्रयाेग गर्ने थाहा नहुन सक्छ । त्यसैले आज हामी यहाँ सोही विषयमा कुरा गर्नेछौँ । इसेवाले दिने रिवार्ड पाेइन्टहरू इसेवाद्वारा उपलब्ध गराइएका उपहारहरूको लागि रिडिम गर्न सकिन्छ।
तपाईंको इसेवा खातामा सङ्कलन गरिएका रिवार्ड पाेइन्टहरू तल उल्लेख गरिए अनुसारकाे गीफ्ट भाैचरहरूसँग रिडिम गर्न सक्नुहुनेछ :
आफ्नाे रिवार्ड पोइन्टहरू रिडिम गर्नका लागि [email protected] मा इमेल गर्न सकिनेछ ।
त्यसैगरी, एकचोटी आफ्नो रिवार्ड रिडिम गरी उपहार भाउचरहरू छनौट गरेपछि याे फिर्ता हुँदैन । इसेवाले सम्पर्क गरेको एक महिनाभित्र आफ्ना उपहारहरू सङ्कलन गर्नुपर्नेछ । उपहार सङ्कलन गर्न आउँदा आफ्नो साथमा फोटो पहिचान (लाइसेन्स, राहदानी, नागरिकता वा मतदाता परिचय पत्र) ल्याउन आवश्यक रहेकाे छ ।